Iyo Yakanakisa Kurwisa-Kukwegura Supplement: Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
musha > Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Mushure meku 2019-kudzidza kwakapedzisa izvo Nicotinamide Mononucleotide yakachengeteka kudyiwa nevanhu kana mashandisirwo ayo akaganhurirwa kune yakatemwa muganho, akati wandei makambani ekugadzira akapinda mumusika nezvipo zvavo. Uku kuwanda kwesarudzo kwakasiya vatengi vachivhiringidzika nezve izvo Nictonimade Mononucleotide (NMN) inowedzera zvakanakira ivo. Mune maonero edu, yakanakisa yekurwisa-kukwegura inowedzera yeNicotinamide Mononucleotide (NMN) muna 2021 ikambani yeCofttek.
Cofttek ndeye A + yakayerwa kambani yanga iri mumusika kweanenge makore gumi nemaviri uye yakagadzira yakavimbika vateveri base panguva ino. Iyo NMN poda yakapihwa nekambani iyi yakaongororwa katatu, mishonga-giredhi NMN yakatorwa kubva kumakambani mamwe chete aakapa NMN kune akasiyana akakosha emakiriniki emunhu miedzo yakaitika pamusoro pemakore. Iyo NMN upfu inopihwa neCofttek inobatsira kunyudza kwayo kupinda mumuviri, nekudaro ichiwedzera bioavailability yechigadzirwa pamwe nemabasa epanyama. Zvinotonyanya kukosha, iyi poda inouya yakawanda uye iwe unogona kuichengeta kwemwedzi mitatu. Zvese, iyi ndeimwe yezvakanakisa zviripo iye zvino mumusika ine yakakwirira mushandisi chiyero uye zvinobva kukambani iyo yakaunza yakavimbika uye inoshanda zvigadzirwa gore negore.
Chii chinonzi Nicotinamide Mononucleotide (NMN)?
Chii chakanakira Nmn?
Inogona here Nmn kudzosera kukwegura?
Iwe unowedzera sei Nmn zvakasikwa?
Inogona here Nmn kuwedzera hurefu?
Inogara kwenguva yakareba sei Nmn mune yako system?
Chii chinoitika kana ukarega kutora Nmn?
Ndeipi yakanakisa yekuwedzera kune yakachembera ganda?
Ndingaite sei kuti ndishandure makwinya zvisikwa?
Ndingashandura sei kuchembera ganda?
Chii chinokurudzirwa naSinclair?
Nmn ine mhedzisiro here?
Ndeipi mhedzisiro mhedzisiro yeserveratrol?
Nicotinamide yakachengeteka kutora zuva nezuva here?
Nei yakawandisa NADH yakaipa?
Ndeipi iri nani Nmn kana NR?
Ndeipi yakanakisa Nmn yekuwedzera?
Nmn inodzosera kukwegura here?
Yakawanda sei NMN yaunofanira kutora?
Nmn yakafanana neb3 here?
Ndezvipi chikafu zvine huwandu hwepamusoro hweNAD +?
Ko Nmn inokonzeresa kumhanyisa?
Ndekupi kwandinogona kutenga Nmn muCanada?
Nmn yakachengeteka here?
Ndingaite sei kuti ndiwedzere yangu NAD + zvakasikwa?
Chii chandinofanira kuunza neNMN?
Ndinofanira kutora TMG neNMN?
Is Nmn niacin?
Nicotinamide riboside yakadzika BP here?
Betaine inowanikwa kupi?
Ndezvipi zvekudya zvinomira kuunyana?
Ndingatarise sei makore gumi mudiki?
Ndingaite sei kumisa kumeso kwangu kubva mukukwegura?
Ndezvipi zvekudya zvinokuita kuti ukure nekukurumidza?
Ndeipi vhitamini yakanakira kumeso kumeso?
Nei Tichida Nicotinamide Mononucleotide (NMN)?
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Inoshandisa
Ndekupi Kwokutenga Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Poda mu Bulk?
Nicotinamide Mononucleotide (1094-61-7) kana NMN inonzi nucleotide inowanikwa zvakasikwa mukati mezvakawanda zvezvikafu zvatinodya. Inowanikwa muavocado, broccoli, magaka, kabichi, edamame uye matomatisi. Zvisinei, huwandu hweNMN hunopihwa nezvikafu izvi hauna kukwana kuchengetedza mabasa akakosha emuviri uye nekudaro, vanhu vanowanzo kurairwa kutora zvinowedzera zveNMN Asi, nei NMN yakakosha kwazvo kumuviri?
Nicotinamide Mononucleotide kana NMN inotungamira kuNicotinamide Adenine Dinucleotide kana NAD +. Mumashoko akareruka, NMN ndiyo mukomboni inoshanduka kuita NAD + kuburikidza nhevedzano yekuchinja kwemakemikari kunoitika mukati memasero. NAD +, kune rimwe divi, inoonekwa seyakakosha kumuviri sezvo ichiita mabasa akakosha akati wandei, kusanganisira kuyananisa mutinhimira wemuviri, kupaza zvinovaka muviri kuburitsa simba remagetsi, nekufambisa maitiro makuru enzymatic, mamwe acho anononoka kukwegura. Nehurombo, kunyangwe NAD + inowanikwa mukati memasero ese emuviri, kugadzirwa kwayo kunodzikira nezera. Zvinotonyanya kukosha, hapana zvekudya izvo munhu anogona kudya kuti awedzere kugadzirwa kweNAD + mukati memuviri. Izvozvi, nokudaro, kuti muviri unoda NAD + inotungamira iyo inoshanduka kuita NAD + mukati mechitokisi, nokudaro ichienzanisa kudzikira kwayo mukati memuviri. Apa ndipo panoshandiswa kushandiswa kweNMN zvinowedzera.
NMN yakawanikwa ichivandudza basa re insulin uye kugadzirwa, zvichikonzera mamwe mabhenefiti emagetsi pamwe nekutsungirira kweglucose. Kunyanya, NMN zvinowedzera zvinogona kubatsira kushanda kudzikisira metabolic mamiriro seshuga, mafuta chiropa chirwere, uye kufutisa.
Iko manejimendi yenikotinamide mononucleotide (NMN) Nicotinamide mononucleotide (NMN) yekuwedzera inosimudzira anti-kuchembera miRNA expression profil muaorta yemakonzo akura, kufanotaura epigenetic rejuvenation uye anti-atherogenic mhedzisiro.
NMN inogona kupihwa zvakachengeteka kumakonzo uye inowanikwa zvakasikwa mune dzinoverengeka zvekudya, zvinosanganisira broccoli, kabichi, cucumber, edamame uye avocado. Chidzidzo chitsva ichi chinoratidza kuti kana NMN yanyungudika mumvura yekunwa uye ikapihwa makonzo, inoratidzika muropa murinopfuura maminetsi matatu.
Masayendisiti akadzidza maviri akadaro mapakati, nicotinamide riboside (NR) uye nicotinamide mononucleotide (NMN), zvakanyanya kupfuura vamwe, uye iko kutsvagisa kuri kukurudzira. Ongororo dzinoverengeka dzinoratidza kuti kuwedzera pamwe neaya anotungamira kunogona kuwedzera mazinga eNAD + uye kuwedzera hupenyu hwembiriso, honye, ​​nembeva.
Chidzidzo chedu chazvino chinoratidza pachena kuti NMN inokurumidza kufurwa kubva mudumbu kuenda muropa kutenderera mukati me2-3 min uye zvakare yakajekeswa kubva mukutenderera kweropa kuita matishu mukati me15 min.
Zvese Resveratol neNMN zvinoshanda nekuvandudza kugona kwemasero mumuviri wako kuzvigadzirisa. Nekudaro, kana iwe ukavatora iwo kwechinguva uye wozomira hazvingakonzere iwe kuti udzokere pakarepo kudunhu rawanga uri usati wavatora nekuti shanduko idzo chaidzo kugadzirisa kwesero basa.
"Lab yedu yakaratidza kuti kupa NMN mbeva kwemwedzi gumi nemiviri kunoratidza kushamisa kukwegura." Sekureva kwaImai, kuturikira zvawanikwa kuvanhu zvinoratidza kuti NMN inogona kupa munhu metabolism yemakore gumi kusvika makumi maviri mudiki.
Iwo gumi nemaviri akanakisa ekurwisa-kukwegura anowedzera
Nicotinamide riboside uye nicotinamide mononucleotide
Deredza kunwa shuga.
Shandisa coconut mafuta.
Tora beta carotene.
Inwa remoni balm shizha tii.
Chinja nzvimbo yekurara.
Geza kumeso kwako.
Dzivisa ultraviolet mwenje
Simudza yako antioxidants
Kubatsira varwere vavo kudzivirira kukwegura kweganda risati rasvika, dermatologists vanopa varwere vavo matipi anotevera.
Dzivirira ganda rako kubva kuzuva mazuva ese.
Nyorera wega-musuki panzvimbo pekuti uwane tan.
Dzivisa kudzokorora chiso kumeso.
Idya chikafu chine hutano, chakaringana.
Inwa doro shoma.
Exercise mazuva mazhinji evhiki.
Chenesa ganda rako zvinyoro nyoro.
Shamba kumeso kwako kaviri pazuva uye mushure mekudikitira zvakanyanya.
Regedza kushandisa zvigadzirwa zvekuchengetedza ganda zvinoruma kana kupisa.
David Sinclair Anotora:
Resveratrol - 1g / zuva nezuva - mangwanani ne yoghurt (ona kwaunotenga) Nicotinamide Mononucleotide (NMN) - 1g / zuva nezuva - mangwanani (ona kwokutenga) Metformin (mishonga yemishonga) - 1g / zuva nezuva - 0.5g mangwanani & 0.5g husiku - kunze kwemazuva ekurovedza muviri.
Kana ikatorwa nemuromo: Nicotinamide riboside iri POSSIBLY SAFE painoshandiswa kwenguva pfupi. Zvimwe zvinokanganisa nicotinamide riboside zvinowanzo nyoro. Zvimwe zvinokanganisa zvinogona kusanganisira matambudziko emudumbu senge kusvotwa uye kuzvimba kana matambudziko eganda sekurumwa uye kudikitira zvakanyanya.
Kana ikatorwa nemuromo: Resveratrol INOFANIRA KUCHENGETEKA painoshandiswa mumari inowanikwa muzvikafu. Kana ikatorwa mumadhosi kusvika ku1500 mg zuva nezuva kusvika pamwedzi mitatu, resveratrol iri POSSIBLY SAFE. Yakakwira doses inosvika 3-2000 mg zuva nezuva yakashandiswa zvakachengeteka kwemwedzi 3000-2. Zvisinei, aya mazinga akakwirira e resveratrol anowanzo kukonzera matambudziko emudumbu.
Nicotinamide riboside inogona kunge yakachengeteka iine mashoma - kana paine - mhedzisiro. Muzvidzidzo zvevanhu, kutora chiuru che1,000-2,000 mami pazuva hakuna kukuvara. Zvisinei, zvidzidzo zvevanhu zvipfupi mukureba uye zvine vashoma kwazvo vatori vechikamu. Kuti uwane yakajeka pfungwa yekuchengetedza kwayo, zvakawandisa zvidzidzo zvevanhu zvinodiwa.
Iyi yakawandisa NADH inogona kupaza iyo redox chiyero pakati peNADH neNAD +, uye pakupedzisira inogona kutungamira mukushushikana kweiyo oxidative uye dzakasiyana siyana metabolic syndromes.
NR inowanzo fungidzirwa seyakatungamira kwazvo kuNAD +, asi hama yayo mamorekuru NMN, nepo isiri chinhu muBasis, iri kusimudza tsiye semwana mutsva pachivharanda.
Ndeipi Nmn yekuwedzera ndiyo yakanyanya kunaka?
NMN Sublingual Mahwendefa.
NAD + Ndarama Liposomal NMN.
Nzira dzekumanikidza kuwedzera kweNAD + nhanho dzakaratidzirwa kugadzirisa basa remitochondrial mumhuka dzekare, kuchinjisa kumwe kurasikirwa kuri kuitika nezera. Iko manejimendi yeNicotinamide mononucleotide (NMN) yakaratidzirwa kudzikisira dysfunctions-inosangana-kukwegura.
Nepo zvidzidzo zvaratidza kuti Nicotinamide Mononucleotide kana NMN yakachengeteka kuti ishandiswe nevanhu, tsvakiridzo ichiri kuitiswa kuti uone muyero unoshanda kwazvo uye kuwanda kweiyo NMN muyero muvanhu. Nekudaro, zvidzidzo zvakaitwa kusvika parizvino zvakaratidza kuti muyero unosvika mazana mashanu emamiriyoni pazuva wakachengeteka kuvarume. Mazuva ano, Nicotinamide Mononucleotide inowanikwa nenzira dzakasiyana, kusanganisira mapiritsi nehupfu. NMN yekuwedzera vanotengesa vanoti izvo zvinonwiwa zvemumuromo zvinoshanda zvakanyanya mukusimudzira kugadzirwa kweNAD + mumuviri. Izvi zvirevo zvinoenderana nekuti Slc500a12, nicotinamide nucleotide transporter, inobatsira nekumwiswa kweNMN mumatumbu.
NMN haisi. NMN haisi fomu yevhitamini B3, uye hapana makiriniki ekuyedza kuratidza kuti inowedzera NAD muvanhu. NMN haisiriwo mhando yemamorekuru yaizombofungidzirwa sevhitamini sezvo iine phosphate, iyo inokanganisa kugona kwayo kupinda mumasero.
Chikafu chinosimudzira NAD Matanho
Kune zvimwe zvekudya zvinogona kusimudzira mazinga eNAD mumuviri. Zvimwe zvacho zvinosanganisira:
Dairy Milk - tsvagiridzo yakaratidza kuti mukaka wemombe isosi yakanaka yeRiboside Nicotinamide (RN). Rita remukaka mutsva wemombe une inenge 3.9µmol yeNAD +. Saka paunenge uchinakidzwa negirazi rinozorodza remukaka, uri kunyatso kuve uri mudiki uye uine hutano!
Hove - heino chimwe chikonzero chekuti unakirwe nehove! mamwe marudzi ehove senge tuna, salmon uye sardines zviwanikwa zvakapfuma zveNAD + yemuviri.
Howa - vanhu vazhinji vanofarira howa uye ivo sechikafu chenguva dzose muchikafu chavo chenguva dzose. Asi iwe waiziva here kuti howa, kunyanya iyo crimini howa, zvakare inobatsira mukuzvisarudzira kuwedzera mazinga eNAD? Hongu, ichokwadi. Saka, nakidzwa nekudya howa uye ramba uchitaridzika uye mudiki uye uchiwedzera kuyaruka!
Mbiriso - yeast chinhu chinoshandiswa kugadzira chingwa nezvimwe zvinogadzirwa kubheka. Mbiriso ine Riboside Nicotinamide (RN), inova inotungamira yeNAD. Hechino chimwe chikonzero chekuti unakirwe nechikafu chako chaunofarira kana mabanzi pese paunoshanyira bhekari! Nakidzwa nechikafu chako chaunofarira uchisimudzira mazinga eNAD panguva imwe chete. Zvinotonhorera sei izvo!
Miriwo yakasvibirira - miriwo yakasvibirira ine mhando dzese dzeuturu mukati mawo izvo zvinobatsira munzira dzakasiyana siyana. Munguva pfupi yapfuura, zvave pachena kuti miriwo yakasvibirira zvakare yakanaka sosi yeNAD yemuviri. Mimwe yemiriwo iyi inosanganisira pizi uye asparagus.
Zviyo Zvese - sezvakambotaurwa, Vitamin B3 zvakare ine RN, iyo inotungamira yeNAD. Zvisinei, kana miriwo, zvinhu zvekudya kana zviyo zvikagadzirwa kana kugadzirwa, vanorasikirwa nehutano hwavo pamwe neiyo vhitamini sosi. Naizvozvo, zvinokurudzirwa kuti iwe udyewo miriwo mbishi uye utore tsanga dzese panzvimbo pechikafu chakagadzirwa.
Deredza Pasi Zvinwiwa Zvinwiwa Zvinodhakisa - NAD inoitisa kuti ichengetedze huwandu hwesimba remuviri. Doro rinokanganisa maitiro aya uye kudzikisira kushanda kweNAD. Naizvozvo, iwe unofanirwa kudzivirira kunwa kwakanyanyisa kwezvinwiwa zvinodhaka nekuti izvo zvakare hazvina kunaka kune hutano hwako.
A 'Niacin flush' ndeimwe divi mhedzisiro yekutora yakakwira doses ye supplemental niacin (Vitamin B3). Iko kuyerera kunoitika apo niacin inokonzeresa iwo madiki macapillaries ari muganda rako kuti awedzere, izvo zvinowedzera kuyerera kweropa kumusoro kweganda. Kusiyana ne vitamini B3 (niacin) zvinowedzera, nicotinamide riboside haifanire kukonzera kumeso kumeso.
NMN inonzi nucleotide inotorwa kubva ku ribose uye nicotinamide. Kunge nicotinamide riboside (Niagen), NMN inotora niacin, uye inotungamira kuNAD +. NMN Canada: Nicotinamide mononucleotide haisi kuwanikwa parizvino sekuwedzera kwekudya muCanada.
Kwemakore, ongororo dzinoverengeka dzakaitwa kuti dziongorore kuti kushandiswa kweNMN muvanhu kwakachengeteka here kana kuti kwete. Izvi zvidzidzo, nguva nenguva, zvakaratidza kuti Nicotinamide Mononucleotide yekushandisa yakachengeteka zvachose kana muyero wayo warambidzwa. Kazhinji, varume vanokurudzirwa kunamatira kune yezuva nezuva muyero usingasviki 500 mg. Zvisinei, inofanira kuiswa pachena kuti iyo FDA haisati yatendera NMN semushonga wakachengeteka. Nekudaro, kana iwe uine chero allergiki kana zvekurapa nyaya, zvakanakira iwe bvunza nachiremba wako usati watanga chero NMN inowedzera.
NAD neNMN inozivikanwa yekurwisa-kukwegura yekuwedzera zvigadzirwa, uye nechikonzero chakanaka.
Zvinonzwisisika Kukurudzira NAD Matanho
Nicotinamide Riboside Kudya Kwekuwedzera
Kuwanda Kwakajeka Kwezuva Kungasave Kwakanaka!
Kuti uvandudze maNAD + ako, iwe unogona kutora kunonoka-kuburitsa NMN capsules ine Sirtuin Activator senge Resveratrol ine yakazara-mafuta yogati iyo inobatsira kuti bioavailability yeResveratrol.
Kana iwe parizvino uri kutora NMN kana kufunga nezve kutanga, funga kuibatanidza neTMG seyakawedzera rutsigiro rwe methylation. Zvimwe zvinopa methyl zvinogona kubatsira zvinosanganisira methylated B6, B12, uye folate.
Ndeupi musiyano uripo pakati peicotinamide uye nicotinamide riboside? (3)
Niacin inzira yakasanganiswa neikotini iyo muviri unokwanisa kushandura kuita NAD. Nicotinamide ndeye amide yeNiacin iyo yakafanana zvikuru neNAD uye ine mashoma mhedzisiro. Nicotinamide riboside inogadzira nicotinamide ine hunhu hwakasiyana.
Kufanana nicotinamide riboside, NMN inotora niacin, uye vanhu vane enzyme dzinogona kushandisa NMN kugadzira nicotinamide adenine dinucleotide (NADH). Mumakonzo, NMN inopinda mumasero kuburikidza nematumbu madiki mukati memaminitsi gumi achishandukira kuNAD + kuburikidza neSlc10a12 NMN mutakuri.
Nicotinamide riboside inowanzoitika ichitangira nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +), muyananisi akajeka wezvakanaka zvinokonzerwa nekarori yekudzivirira, uye nekudaro inoverengeka caloric inorambidza mimetic komputa. Isu nguva pfupi yadarika tapedza kudzidza kwekutanga kwe nicotinamide riboside yekuwedzera mune vane hutano vane makore ari pakati nepakati uye vakuru uye takaratidza kuti vhiki nhanhatu dzekuwedzera dzakadzikira systolic blood pressure (SBP) ne6 mmHg mune vanhu vane yekutanga SBP ye8-120 mmHg (yakakwidziridzwa SBP / danho 139 hypertension) zvichienzaniswa ne placebo, uye kudzikisira kuomarara, yakasimba kuzvimiririra kufanotaura kweCVD uye kuwirirana kwehurwere nekufa.
Betaine inowanikwa mune zvidiki, zvirimwa, uye mhuka uye chinhu chakakosha pazvinhu zvakawanda zvekudya, zvinosanganisira gorosi, shellfish, sipinashi, uye shuga beet. Betaine izwitterionic quaternary ammonium komputa iyo inozivikanwawo sekuti trimethylglycine, glycine betaine, lycine, uye oxyneurine.
Heano gumi ezvakanakisa anti-kuchembera chikafu chekusimbisa muviri wako kune kupenya kunobva mukati.
Tsvuku bhero pepper
Shandisa iyo Hydrating Mask.
Sarudza Chiedza Chinopenya
Jekesa Bvudzi Rako Zvishoma
Exfoliate (Asi Usapfuure Izvo)
Chena Mutsetse Wako Wemvura
Pedzisa Kutarisisa Kwako Ne Mineral Mist
Dzivirira ganda rako kubva kuzuva mazuva ese
Nyorera wega-musuki panzvimbo pekuti uwane tan
Dzivisa kudzokorora chiso kumeso
Idya chikafu chine hutano, chakaringana
Inwa doro shoma
Exercise mazuva mazhinji evhiki
Chenesa ganda rako zvinyoro nyoro
Anotapira mbatatisi yemafuta eFrance
Yakatsemurwa chingwa chechichena chingwa
Uchi kana muchero weshuga chena
Mafuta omuorivhi kana avocado yemargarine
Gara nehuku ye nyama inogadzirwa
Inzwa kunze kwemukaka
Funga kaviri pasoda nekofi
Inwa doro zvine mwero
Dzivisa kubika mukudziya kukuru
Shandura micheka yemupunga
Counteract fructose ine lipoic acid
Vitamin C inogona kubatsira kudzivirira zviratidzo zvekukwegura nekuda kwebasa rayo rakakosha mumuviri collagen synthesis. Inobatsira kuporesa ganda rakakuvara uye, mune dzimwe nguva, inoderedza kuoneka kwemakwenzi. Kudya zvakakwana vhitamini C kunogona kubatsira kugadzirisa uye kudzivirira ganda rakaoma.
Kuchembera inoenderana-nenguva uye nguva-inobatsira kudzoserwa kwemabasa emuviri wemunhu. Kunyangwe kukwegura kusingadzivisike uye kusingadzivisike, vesaenzi vakapa makore kuti vanzwisise kuti maitiro aya anogona kunonoka uye kudzorwa sei. Uku kuenderera mberi kwekutsvaga kwakatungamira mukuwanikwa kwezvinhu zvakati wandei nemakomputa ane anti-kukwegura zvivakwa zvinogona kushandurwa kuita anti-kuchembera zvinowedzera Imwe yemakomputa akadaro ane akakosha ekurwisa-kukwegura zvivakwa zvine masayendisiti anonzwa kufadzwa ndeyeNMN kana Nicotinamide Mononucleotide. Muchikamu chino, tinokurukura zvese zviripo kuziva nezveNMN pamwe neakanakisa ekurwisa-kuchembera anowedzera nicotinamide mononucleotide muna 2022.
Kusvikira makore mashoma apfuura, zvese zvidzidzo zvine chekuita nekushandisa kweNMN zvakaitwa pamhuka uye nepo zvidzidzo izvi zvichiratidza mibairo inovimbisa, mhedzisiro iyi yakanga isina kukwana kumisikidza zvakanakira kushandiswa kweNMN kuvanhu. Muna 2016, ongororo yakaitiswa yekuongorora kuchengetedzwa kwekushandisa kweNMN uye kosi yayo yenguva muropa remunhu. Chidzidzo chacho chakapa mhedzisiro inovimbisa. Tumira izvo, kumwe kuongorora kwakaitwa mu2016 kuongorora mashandisiro eNMN kushandiswa mune makumi mashanu evakadzi vane chirwere cheBMI, ropa glucose, uye triglycerides yeropa. Chidzidzo chakabudirira. Nekudaro, sezvo nzvimbo yekudzidzira yaive yakatemerwa vakadzi veimwe zera, vesaenzi vakatenda kuti humwe humbowo hwaidikanwa kuti uone kana kushandiswa kweNMN kwakachengeteka kuvanhu.
Naizvozvo, munguva pfupi yapfuura, muna 2019, ongororo yakaitwa kuClinical Trial Unit yeKeio University School of Medicine. Nyaya yezvidzidzo izvi yaive varume gumi vane makore makumi mana kusvika makumi matanhatu. Varume ava vaipiwa dosi kubva pa10 mg kusvika 40 mg. Chidzidzo ichi chakagumisa kuti NMN inoshivirirwa zvakanaka nevanhu uye yakachengeteka kudya chero nguva yakashandiswa. Ichi chidzidzo chakakosha sezvo chaive chekutanga NMN kuongororwa kwakaitwa pane vanhu kudzidza mhedzisiro yeNMN pahutano hwevanhu hwese. Pakangotangwa kuti kushandiswa kweNMN kwakachengeteka, vagadziri vakatanga kubhomba musika nezviwanikwa zveNMN, zvinova zvakajairika mazuva ano.
Muchikamu chino, tinokurukura zvingabatsire zvakabatana neNicotinamide Mononucleotide kana NMN mabhenefiti.
N NMN Inodzora Kukwegura
Imwe yemabhenefiti akakosha eNMN ndeyekuti inoderedza kukwegura. Makore mashoma apfuura David Sinclair, anozivikanwa weAustralia Biologist uye purofesa weGenetics, akapa chiratidzo chekuti NAD + inoderedza kuchembera pamwe nekutanga kwezvirwere zvinoenderana nezera muvanhu. Nekudaro, kugadzirwa kweNAD + kunoderera nezera. Saka, sevanhu zera, kudikanwa kweiyo NAD + yekutanga inowedzera mukati memiviri yavo. Apa ndipo panopinda NMN: NMN inopinda mumaseru uye inosangana nekushanduka kwemakemikari mazhinji isati yashanduka kuita NAD + uye nekudzora maitiro ezviitiko zvezera.
② Vanhu Vanotambura nechirwere cheshuga Vanogona Kubatsirwa Kubva Mukushandisa Kwayo
Chidzidzo chakaitwa kuti chidzidze kuti NMN yekuwedzeredza muromo yakabatsira sei nezvekudya uye nezveruchiva zvinoenderana neshuga mumakonzo. Chidzidzo chacho chakaratidza kuti makonzo akapihwa nemuromo NMN kuwedzeredzwa kwakaratidza kuwedzera kwekunzwa insulin pamwe nekuwedzera kwayo kuvanda. Ichi chidzidzo chakapa chimwe chinoratidza kuti Nicotinamide Mononucleotide kana NMN yekuwedzeredza nemuromo inogona kubatsira vanhu vane chirwere cheshuga.
③ NMN Kushandiswa Kunobatanidzwazve neKuvandudzwa kweMoyo Hutano
Kumwe kuongorora kwakaitwa kuti vadzidze kuti hutano hweNMN hwakakanganisa hutano hwemwoyo mune mbeva Chidzidzo ichi chakaratidza kuti NMN haina kungodzosera chete zera-rakanangana neropa uye kukuvara kwe capillary mumakonzo asi zvakare zvakatungamira pakuyerera kweropa. Chakatonyanya kushamisa inyaya yekuti makonzo akapihwa NMN achiwedzerwa nemuromo, kuputika kwemidzi mitsva yeropa kunoonekwa. Nguva pfupi yadarika, kumwe kuongorora kwakaitwa kudzidza nezveNMN pahutano hwekunzwa makonzo uye chidzidzo ichi chakaratidzawo mhedzisiro yakafanana. Izvi zvidzidzo zvakapa humbowo hwakakwana kune vanoongorora kuti vatende kuti kunwa kweNMN zvakare kunosimudzira hutano hwemwoyo muvanhu.
④ Vanhu vane Alzheimer's Vanogona Kubatsirwa neNMN Use
Mune vanhu vanotambura nechirwere cheAlzheimer, iwo mazinga eNAD anoderera zvakanyanya. Nekudaro, apo vanhu vanotambura nechirwere cheAlzheimer vanoshandisa NMN, muviri unoita nekuwedzera huwandu hweNAD +, inova iyo, inotungamira mukuwedzera kwekudzora mota, yakawedzera SIRT3 geni chiitiko, yakavandudzwa ndangariro, uye kudzikisira neuroinfigueation. Nekudaro, vanhu vanotambura neAlzheimer's vanogona kubatsirwa nekudya NMN.
N NMN Inovandudzawo Itsvo Kushanda
Oral NMN kuwedzerwa kunosanganiswa neakagadziriswa itsvo basa. Izvi zvinodaro nekuti NMN inowedzera kugadzirwa kweNAD + uye SIRT1, ese ari maviri akabatana nebasa retsvo.
Kana iwe uri kutsvaga kutenga Nicotinamide Mononucleotide (NMN) poda muhuwandu, nzvimbo yakanakisa yekutenga NMN powder ndeye cofttek.com. Cofttek inyanzvi yepamusorosoro yemishonga iyo yanga ichipa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvemhando yepamusoro kubva muna2008. Iyo kambani inozvirumbidza nechikwata chinoshamisa cheR & D nevanhu vane ruzivo vakazvipira mukugadzira zvigadzirwa zvemakwikwi. Cofttek ine vadyidzani uye inopa zvigadzirwa zvayo kumakambani emishonga muChina, Europe, India, uye North America. Iyo β-Nicotinamide Mononucleotide inopihwa neCofttek ndeyemhando yepamusoro uye yakachengeteka zvachose kudyiwa nevanhu. Zvinotonyanya kukosha, kambani inopa iyi hupfu muhuwandu, kureva muzvikamu zve25kgs. Saka, kana iwe uri kutarisa ku tenga hupfu uhwu hwakawanda, Cofttek ndiyo kambani yaunofanira kubata - ndiyo yakanakisa Nicotinamide Mononucleotide (NMN) mupfu mupi mumusika.
(1). Yao, Z., et al. (2017). Nicotinamide Mononucleotide Inhibits JNK Kumisikidza Kudzosera Alzheimer Chirwere.
(2). Yoshino, J., et al. (2011). Nicotinamide Mononucleotide, Chinokosha NAD (+) Pakati, Inobata iyo Pathophysiology yeDhi uye Zera-Inokonzera Chirwere cheshuga muMakonzo. Cell Metabolism.
(3). Yamamoto, T., et al. (2014). Nicotinamide Mononucleotide, wepakati weNAD + Synthesis, Inodzivirira Moyo kubva kuIschemia uye Kupindazve.
(4). Wang, Y., et al. (2018). +
(5). Keisuke, O., et al. (2019). Zvinokonzerwa neakachinja NAD Metabolism muMetabolic Disorders. Zvinyorwa zveByomedical Sayenzi.
(6). Rwendo rwekuongorora egt.
(7). Oleoylethanolamide (oea) -iye mashiripiti wand ehupenyu hwako.
(8). Anandamide vs cbd: ndeipi iri nani kune hutano hwako? Zvese zvaunoda kuti uzive nezvavo!
(9). Zvese zvaunoda kuti uzive nezve nicotinamide riboside chloride.
(10). Magnesium l-threonate inowedzera: mabhenefiti, muyero, uye mhedzisiro.
(11). Palmitoylethanolamide (pea): mabhenefiti, muyero, mashandisiro, kuwedzera.
(12). Wepamusoro 6 hutano hunobatsira hwe resveratrol zvinowedzera.
(13). Wepamusoro mashanu mabhenefiti ekutora phosphatidylserine (ps).
(14). Wepamusoro mashanu mabhenefiti ekutora pyrroloquinoline quinone (pqq).
(15). Iyo yakanakisa nootropic yekuwedzera yealpha gpc.
Ini ndinofunga NMN inoshanda zvakanyanya kupfuura nicotinamide riboside (NR), sezvo ichigona kupinza zvirinani zvakanyanya mumatumbu madiki.
GeeHii Kuongorora kweBongo
Vanhu kazhinji vanofanirwa kuwana chiyero chakaringana chekuwedzera chemiviri yavo, kazhinji kumwe kunhu pakati pe250mg ne1g. Zvekare iwe zvauri, paunonyanya kubatsirwa kubva zvakajairika.
Usawedzere neNicotinamide (NAM) chete. Izvo chaizvo zvinoita zvinopesana nezvamunoda. Kana iwe ukapa muviri wako NAM zvinokonzeresa kudzikira muNAD +.
Sarudza chero NR kana NMN. Zvakare, usaedze kutenga zvakachipa zvine mumvuri zvinhu kubva kuAlibaba kana chero chinhu. Zvave zvichiratidzwa munguva yakapfuura kuti zvakawanda zvezvinhu izvozvo ndezvekunyepedzera uye zvinogona kukukuvadza iwe.
Kana ikatorwa isati yaita cancer, yakakwira NAD + nhanho dzinofanira kudzikisa njodzi yekuchinja kweDNA uye kuunganidzwa kwemaseru enescent, iyo chete nyaya chaiyo iri kutora NAD + booster apo pari zvino iine cancer, sezvo ichigona kukurumidza kukura kweNAD + kunoenderana nemamota sezvavanoshandisa NAD + zvakanyanya sezvinoita masero enguva dzose, ndosaka zvakanaka kuongorora yako chena masero eropa kuverenga mwedzi yega yega. Kana iwe usina kenza, inofanira kuidzivirira.
Ini handikwanise kutaura kune yangu mitochondria, asi mushure megore nehafu kutora nmn (zvinyorwa zvemitauro) iwe unofanirwa kuitora kubva mumaoko angu anotonhorera akafa.
Kuwedzera simba (simba rekuchengetedza, kusanzwa wired), kukurumidza kupora kwekurovedza muviri uye kushushikana, kurara zvirinani, kunyangwe yakavaka imwe mhasuru kekutanga muhupenyu hwangu.
Sublingual NMN pa1g inondipa inoshamisa simba rekuwedzera. Ndinozviona izvozvi. Chiono changu chinoshandukawo (chinova chinopinza). Zvakare, iyo bonefish yadzoka mumwaka. ;-)
David Sinclair akataura kuti mbeva pamatanho epakati emapiritsi dzaive nehupenyu hwakareba uye izvo zvine musoro kwandiri.
Vanhu vanowanzo fanirwa kuwana iyo chaiyo huwandu hwekuwedzera kune yako miviri, kazhinji pakati pe250mg ne1g.
Zvekare iwe zvauri, paunonyanya kubatsirwa kubva zvakajairika.
Gara mukati maro kwenguva refu. Ndakaona mavanga ekare achinyangarika, masaga mashoma pasi pemaziso angu, uye shanduko huru yemetabolism. Chishoma chehangover chinhu zvakare.
Ndatenda, ndiri kufara kuona yakadaro yakanaka uye inosetsa chinyorwa.